Tsipika plastera, tokony hatao endrika toy izao!
Home / Interior design / Tsipika plastera, tokony hatao endrika toy izao!
2021 / 06 / 18 FisokajianaInterior design 6380 0
Ny tsipika plaster, dia fitaovana haingon-trano anatiny sy kanto. Ny fisiana amin'ny endrika tsipika dia misy fihenjanana mahery vaika, ary ny fiorenan'ny afo, ny hamandoana, ny hafanana, ny acoustique ary ny fikolokoloana hafanana dia mampalaza azy io. Ny fomba vaovao malaza na minimalist na haitraitra maivana, na aiza na aiza no ahitanao ny tarehin'ny tsipika plaster, koa ahoana marina no tokony hamolavola ny tsipika plaster? Ity lahatsoratra ity dia manadihady ny famolavolana ny tsipika plaster amin'ireo zoro manaraka ireto.
Ny karazana tsipika plaster
Ny endrika famolavolana ny tsipika plaster
Tombony sy fatiantoka ny tsipika plaster
Toerana fananganana tsipika plaster
Karazana tsipika plaster
Misy karazany maro ny tsipika plaster
Ny mahazatra indrindra dia tsipika zoro gypsum, tsipika fisaka gypsum, voninkazo zoro gypsum ary tontonana jiro gypsum
a. Tsipika zoro gypsum
Ny zoro plastera na ny zorony an-tampon'ny plaster dia ampiasaina irery amin'ny valindrihana sy ny rindrin'ny trano tany am-boalohany, amin'ny ankamaroan'ny fomba amerikana, eoropeana ary rustika. Mazava ho azy, misy olona maro mieritreritra fa ny haingon-trano rehetra dia mila manao ny zoro ambony zorony, amin'ny ankapobeny misafidy endrika tsotra amin'ny tsipika. Raha misafidy tsipika saro-pantarina ianao, lamina manankarena, dia azonao atao koa ny mahita ny sarom-baravarana, ny fihodinana dia misy tsipika miako mitovy amin'ny endrika koa.
Ny andraikitry ny zoro ambony sy ny fampiasana mahazatra
Ny fahaiza-manao dia ny fanalefahana ny tsipika mafy amin'ny valindrihana sy ny rindrina, amin'ny fanaovana andraikitra buffer.
Afaka manarona ny trano mihitsy valin-drihana sy ny zorony rindrina dia tsy mahitsy, mibontsina sy miadana, manafina ny ratsy tarehy.
Mazava ho azy fa ny tariby sasantsasany manelingelina slot, dia azo afenina ao anaty slot ao ambadiky ny zoro ambony.
Ny olona sasany dia manazava amin'ny rindrina loko vita amin'ny taraiky sy latabatra fotsy misy tsipika zorony ambony hanamorana ny fanamboarana, ny hierarchy.
Ny tsipika zoro ambony dia azo apetaka ary ampiasaina hanamafisana ny fahatsapana fitohanana namboarin'ilay valin-drihana napetraka.
Amin'ny kabinetra sasantsasany eny an-tampony dia hampiasaina koa ny boaty ridao (fitaovana tsy plastera, MDF na hazo mafy orina).
Imbetsaka ny tsipika zoro ambony dia tsy irery, dia hampiasaina amin'ny tsipika fisaka, tsipika voninkazo, tsipika fanidiana sns. Amin'ny valindrihana sarotra sasany na ny fomba fanaingoana sarotra dia arotsaho toa mirindra tsara, satria maro ny tsipika tsy misy. Ohatra, ny valindrihana sasany mitete dia hampiasa ny tsipika fisaka, ary ny fampifangaroana ny famaritana samihafa ny tsipika zoro ambony, ny zoro zoro, ny zoro zoro, ny tsipika boribory somary apetraka. Ny zoro zorony sy ny zoro zoro dia matetika tsy ampiasaina irery, bebe kokoa ao amin'ny superposition amin'ny fampiasana ny fanidiana, fa koa mba hampitomboana ny fahatsapana ambaratongam-pahefana telo.
b. Tsipika tsipika plaster
Ny tsipika fisaka dia azo ampiasaina amin'ny tsipika rindrina sy valindrihana misy endrika maro samihafa, azo faritana mifanaraka amin'ny fombany, sady tsotra no tsara tarehy, ary mety ho sarotra sy maro karazana. Ny lahasa lehibe dia ny filalaovana vokatra haingon-trano, ny fanomezana ny rindrina banga na ny tampony ambony dia manan-karena amin'ny lafiny telo refy, manatsara ny kalitaon'ny habakabaka kanto.
c. voninkazo zorony plastika
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fihaonan-dàlana misy tsipika plastera miverina mitsivalana roa, izay marefo ary mora be mamorona fahatsarana haja sy avo lenta amin'ny rindrina. Io dia anjakan'ny fomba amerikanina eropeana, fomba eropeana tsotra ambanivohitra. Ho an'ny endrika modely, maro ny olona mihevitra fa tsy mora ny hikarakara azy, ka ny fikatsahana ny fahatsoran'ny vondrona mpampiasa ny ankamaroany dia tsy hisafidy. Ankehitriny, ny fomba fiotazam-boaloboka malaza kokoa, andramo ny mampiasa an'ity tsipika ity hifanaraka, ny fampiasana eo an-toerana dia afaka manatsara ny fahatsapana endrika.
d. tontonana plastika
Amin'ny endriny miaraka amin'ny hazavana lehibe, ny ankamaroan'ny fomba eropeana sy amerikana dia hapetraka eo afovoan'ny kapila plaster amin'ny efitrano, anjara biriky fotsiny. Izy io koa dia hametraka jiro mivantana eto mba hampanan-karena ny vokatry ny haingon-trano amboniny ary hanasongadinana ny fahatsapana telo-refy.
Ny endrika tsipika plaster
Mikasika ny famolavolana ny tsipika plaster amin'ny endrika, dia misy maro ny mety endrika famolavolana ho an'ny endrika miorina amin'ny rindrina, izay ampiasaina matetika amin'ny endrika backdrop. Ho an'ny tontolon'ny efitrano fandraisam-bahiny na backdrop efitrano fandraisam-bahiny, ny famolavolana ny tsipika plaster amin'ny endriny dia mizara ho sokajy manaraka ireto. Mazava ho azy, miaraka amin'ny fitomboan'ny famoronana sy ny fisainan'ny mpamorona, ny tsipika plaster dia azo namboarina ho lasa endrika tsy manam-paharoa ihany koa.
Ny endrika tsipika tsotra dia mety kokoa amin'ny endrika famolavolana minimalista. Ny rindrina dia voaravaka sary hosodoko amin'ny rindrina, jiro rindrina na fahitalavitra mihantona nefa tsy mijery ny toerana mety.
Ny endrika tsipika sarotra kokoa amin'ny ankapobeny dia tsy amin'ny ravaky ny kojakoja hafa. Ny endrika sasany dia azo ampifanarahana amina amam-patana endrika eropeana mba hanasongadinana ny fahatsapany rendrarendra.
Amin'ny ankapobeny, ny tsipika plaster dia hosodoko amin'ny loko amin'ny rindrina mba hahatonga ny endrika ankapobeny hirindra kokoa. Amin'ny fisafidianana ny maodely, dia mety ho tsipika fisaka, voninkazo zorony, tsipika zoro ary modeling mifanentana hafa koa, miaraka hanehoana ny vokatry ny rindrina.
a. Tombony amin'ny tsipika plaster
(1) Vidiny mora. Ny mora indrindra amin'ny karazan-tsipika rehetra dia zakan'ny tsirairay.
(2) lamaody sy mahomby. Tsotra sy mamirapiratra, somary marobe ny tsipika, na amin'ny haitraitra maoderina na maivana, na minimalist aza, dia mety hiavaka.
(3) fananganana mety. Ny teknolojia fampifamatorana sy ny fizarazarana dia tsy mitaky, mora vita, tsy dia misy kilema.
(4) Vokatry ny haingon-trano matanjaka. Tsy misy lamina isan-karazany, fa misy endrika hafa koa azo soratana mifanaraka amin'ny safidinao manokana. Aorian'ny famolahana ny lamin'ny tsipika plastera, malama sy marefo ny etona izay mety hiteraka fiatraikany lehibe amin'ny fahitan'ny olona.
b. Ny fatiantoka ny tsipika plaster
(1) hiteraka ny tsy fitovian'ny maripana amin'ny maripana fanovana sy famakiana, amin'ny alàlan'ny rano no hamolavola, ho maizina ny maharitra.
(2) mavesatra ny tsipika plastera, marefo sy tapaka, misy kofehin'ny vera ao anatiny, raha kely dia kely ny fahombiazan'ny fiarovana.
(3) Rehefa mandeha ny fotoana, dia misy tsipika plastera mora mando sy maintso.
(4) Plastera afaka mamokatra kofehy sy vovoka manify, izay mety hanimba ny taovam-pisefoana.
(1) Ny fitsaboana fototra amin'ny toerany, ny fitsaboana ny faka-bozaka ihany no maharaka ny fenitra, dia ny manome antoka fa ny fananganana tsipika plastera dia mifanaraka amin'ny fepetra ilaina amin'ny ankapobeny.
Ahoana ny fomba hiheverana azy ireo hatramin'ny fenitra? Voalohany indrindra, ny tampon'ny rindrina dia tsy maintsy voamarina miaraka amin'ny mpanapaka aorian'ny fanavaozana, arahin'ny rindrina ambony rindrina efa voakiky indroa. Ny fisalasalana an-tampon'ny sary dia tsy misy faritra mipoitra na marokoroko, mba hanatanterahana izany mba hiantohana ny kalitaon'ny fananganana tsipika plastika any aoriana. Ny fenitry ny fananganana sy ny fananganana bebe kokoa, arosoy eto raha te hahalala bebe kokoa: ny tena sehatra tsy afaka mamerina ny vokany? Amin'ny farany, an'iza ny olana!
(2) Filaharana fananganana tsipika plastera: fanamboarana aloha avy eo aloha. Ataovy izany mba hahazoana antoka fa ny eo aloha tsy dia mifangaro, ary apetraho ny antsasaky ny ampahany amin'ireo ampahany tsy taitra.
(3) Fananganana hanao fanitsiana haingana haingana, raha manamboatra sy manitsy. Aorian'ny fanitsiana amin'ny fotoana fohy indrindra hamenoana ny toerana amin'ny toerany, hanadio ny toerana amin'ny toerany, ary avy eo diovina amin'ny rano madio mba hahazoana antoka fa madio sy milamina ny faritra haingon-trano.
(4) Ny zoro sy ny fizarana miaraka no laharam-pahamehana amin'ny fananganana. Ny asa vita tsara na tsia, avy amin'io fotoana io dia ho mora hita. Matetika ny faritra mitambatra dia tsy maintsy kosehina lalotra, ary avy eo miakatra, tandremo sao mety ny lamina, mifanaraka tsara ny haavony. Ny faharoa dia ny tsipika plaster amin'ny ankapobeny mankany amin'ny tsipika iray tsy afaka miditra tampoka sy mivoaka amin'ny rindrina hanaraka. Ny faritra ambany dia takiana amin'ny fampiasana plaster pad hanitsy. Farany, ny fampiasana rano madio dia plaster amin'ny tsipika plaster madio, mba tsy ho afaka manadio avy eo.
(5) Fanamboarana ny tsipika plaster, io teboka io dia mila mpanao hosodoko hamitana. Aorian'ny tsipika plaster, ny mpanao hosodoko dia manamboatra ny ampahany amin'ny tsipika plastera indray mba hahatratrarana ny ampahany iraisana, ka sarotra ny mahita azy. Ankoatr'izay, ny tampon'ny rindrina dia namboarina mba hahazoana antoka fa mitovy ny sakan'ny tsipika plastera amin'ireo faritra amin'ny rindrina.
(6) loko borosy borosy. Ny fanazaran-tena mahazatra dia ny fikosehana volon-doha, ary avy eo borosy palitao roa. Rehefa manamboatra ianao dia tokony hanara-maso ireo mpiasa. Amin'izao fotoana izao, mpiasa marobe no tsy manao afa-tsy palitao roa. Ny tsy fitovizan'ny loko dia tokony hifanaraka amin'ny torolàlana momba ny fananganana. Raha manify loatra dia ho mora foana ny hijanona. Raha matevina loatra izy dia ratsy ny fluidity ambonin'ny loko ary tsy fisaka ny tampony.
(7) Wallpaper eo amin'ny rindrina. Rehefa manamboatra sary an-drindrina ianao dia aza hadino ny mananatra ireo mpiasa sary an-drindrina mba hikosoka ny lakaoly fitehirizan-taratasy eo amin'ny tsipika am-baravaran'ilay tsipika plaster. Raha tsy izany, aorian'izay, ny loko latsa-by dia hamela marika maizina misy fiatraikany amin'ny vokatry ny haingon-trano vita amin'ny loko latex.
Ary farany, tabilao hamintina ny atiny androany.
Previous :: Mitadiava toerana mahafinaritra eo amin'ny tontolo voajanahary | Taiguk Shapeshang Next: Ny fiverenana tonga lafatra amin'ny tokatrano miendrika bala, faritra tsy miankina tena manokana hamoronana trano “mahafinaritra” kokoa!
2021 / 08 / 15 5246
2021 / 08 / 15 5811
2021 / 08 / 15 5573
2021 / 08 / 14 5339
2021 / 08 / 14 5894
2021 / 08 / 14 5079